Jawaabaha talaalka ee waalidiinta iyo qoysaska
Ma tahay inaan cunugayga talaallo?
Talaalku ma yahay mid badqab u leh waxna u taraaya carruurta?
Cunugayga ma heli karaa talaalka COVID-19 isla waqtiga uu qaadanaayo talaallada kale?
Maxaan filan karaa intaan talaalka siinaayo cunugayga?
Waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhalan kara talaalka?
Ku qoran bogaanJawaabaha talaalka ee waalidiinta iyo qoysaskaMa tahay inaan cunugayga talaallo?Talaalku ma yahay mid badqab u leh waxna u taraaya carruurta?Cunugayga ma heli karaa talaalka COVID-19 isla waqtiga uu qaadanaayo talaallada kale?Maxaan filan karaa intaan talaalka siinaayo cunugayga?Waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhalan kara talaalka?
Carruurta jira 5 iyo kawayn ayaa hadda u qalma inay helaan talaalka COVID-19.
Haddii aad tahay waalid ama daryeele ilmo, waa wax caadi ah inaad su'aalo ka qabto talaalka cunugaaga. Waa muhiim inaad hesho jawaabta su'aalahaaga aadna la hadasho dhakhtarkaaga marka aad samaynayso dookha siinta talaalka COVID-19 cunugaaga.
Soo degso Su'aalahaan iyo Jawaabahaan ku saabsan talaalka COVID ee kurayda oo uu bixinaayo Dr. Bukhosi Dube, oo ah martida barnaamijka raadiyaha ee "Ask a Black Doctor (Waydii Dhakhtar Madoow ah)."
Carruurta ayaa aad ugu jiran kara COVID-19, talaalka ayaana ah qaabka ugu fiican ee looga difaaci karo. Faracyada cusub ee COVID ayaa aad u faafaaya, aadna ugu khatar badan da'yarta ku dhaqan Oregon na waxaa isbitaalka loo dhigaa COVID-19 dartiis. Nasiib wanaag, talaalladu waxay bixiyaan difaac waxtar leh oo ka hortagaaya in aad loogu xanuunsado ama isbitaalka qofka loo dhigo COVID-19 awgiis, ama inuu ku faafiyo dad kale.
Haa, talaallka COVID-19 waa mid badqab iyo waxtar u leh carruurta jira 5 sano iyo ka wayn. Tijaabooyinka caafimaadka, talaalka COVID-19 ee Pfizer ayaa muujiyay inay wax wayn ka tarayaan ka difaacida carruurta da'doodu tahay 5 sano iyo ka wayn inay aad ugu xanuunsadaan COVID-19 ama ku faafiyaan dadka kale.
Bogaga la xariir
Haa, cilmi baaris ayaa muujinaysa inay badqab u leedahay in cunugaagu qaato talaalka COVID-19 isla marka uu qaadanaayo talaallada xanuunnada kale, sida talaalka jadeecada. Dhakhtarka cunugaaga ayaa kaa caawin kara inaad hesho waxa ugu habboon ee cunugaaga u shaqayn kara.
Kadib booqashadaada, ka eeg astaamaha ciladaha badanaa talaalku keeno cunugaaga, sida xanuunka garabka, qandho ama daal badan. Cunugaagu wuxuu u baahan yahay kuurada labaad ee talaalka ku dhawaad 3 asbuuc kadib kuuradiisa koobaad ilaa inuu qaab kale ku taliyo maahee dhakhtarkaagu.
Dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhasha talaalka waa calaamado caadi ah oo muujinaaya in jirka cunugaagu dhisaayo difaac ka dhan ah fayraska. Dhibaatooyinka talaalka ka dhasha ayaa kaa ba'aaya maalmo yar gudahood.
Saarida meesha maro qaboow, cabida biyo badan iyo qaadashada nasiino badan ayaa ku caawin kara. Daawooyinka xanuun bi'iyaasha ah sida Advil ama Tylenol ayaa sidoo kale xanuunka kaa jebin kara.